Mpanamboatra poketra - Factory Wallet China, mpamatsy
TIGERNU kitapo lamaody fampirimana roa
Fitaovana: ny kitapom-batsy tigra nu tigra dia mampiasa Oxford matevina azo ahodinkodina ho fitaovana lehibe, lamaody, mateza ary tia namana. Ny zipper ampiasaina dia namboarina, avo lenta ary malefaka ampiasaina.
Fahafahana: ny habeny dia 10.5 * 1.5 * 19.5cm, miaraka amina karatra 12, mora entina ny karatrao ary mifanaraka amin'ny zavatra ilainao isan'andro. Paosy zipper iray ho an'ny vola madinika sy zavatra sarobidy, mpizara telo ho an'ny naoty. Izy io koa dia mety amin'ny telefaona 6inch. Ny lalan'ny fanidiana dia ny flip bokotra, manome fiarovana bebe kokoa amin'ny fiainanao isan'andro.
Izy io dia mpiara-dia amin'ny dia tonga lafatra, famolavolana lamaody ary lanja maivana ho an'ny lehilahy, vehivavy, mpianatra. Azonao atao ny mitazona ao anaty kitaponao na mitondra amin'ny tananao mba hahamora azy. Safidy tsara amin'ny fiainana andavanandro, fitsangatsanganana, fiantsenana, sekoly, asa sns.
TIGERNU kitapom-bolavola voalohany
Fitaovana: ny kitapom-batsy TIGERNU voalohany dia mampiasa fantsom-panafody matevina ho toy ny fitaovana lehibe, lamaody, mateza ary eco-friendly.
Fahafahana: ny habeny dia 11.5 * 1.5 * 21.5cm, miaraka amina kara-pilalaovana 8, mora entina ny karatrao ary mifanaraka amin'ny zavatra ilainao isan'andro. Izy io koa dia mety amin'ny telefaona 6 inch.
Izy io dia mpiara-dia amin'ny dia tonga lafatra, famolavolana lamaody ho an'ny lehilahy, vehivavy, mpianatra. Misafidiana TIGERNU, mifidiana fiainana tsara kokoa.